नयाँ वर्ष २०७३ बाट तपाईंले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः वैशाख १, २०७३ - साप्ताहिक
नयाँ वर्ष २०७३ बाट तपाईंले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
वैशाख १, २०७३
ग्यास, पेट्रोलका साथै नाच्न–गाउन पाइयोस् ।
धीरज राई, गायक
देशमा संविधान जारी भएको छ । सबै नेपालीमा आशा, जोस, जाँगर र काम गर्ने हिम्मत बढेको छ । सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तनसँगै देश विकासमा आमूल परिवर्तनको संभावना देखेको छु, तर राजनैतिक दल तथा नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तित्वहरूको मानसिकता परिवर्तन हुने सम्भावना देखेको छैन ।
सुमन दाहाल, निर्देशक
देश हाँक्ने नेतृत्ववर्गमा देश विकासका लागि केही गर्ने बुद्धि पलाउँछ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
छिमेकी मुलुकसँग रिस होइन, प्रेमले अघि बढौं । देशको बिग्रिएको स्थितिमा सुधार आउला कि भन्ने आशा छ । जनताले अभाव झेल्नु नपरोस् । विदेशी चलचित्रलाई भन्दा नेपाली चलचित्रलाई बढी माया गरौं ।
०७३ मा देशमा शान्ति, अमन–चयन कायम हुने तथा पुनर्निर्माण एवं विकासले गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
दीपेन्द्र केसी, म्युजिक भिडियो निर्देशक
प्रत्येक वर्षझैं यो वर्ष पनि आफ््नो जीउ घट्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु, तर दुई महिनापछि यो अपेक्षा पूरा नहुँदा मरिमरी हाँस्नेछु ।
शान बस्नेत, चलचित्र लेखक
बाहिरी हस्तक्षेपको कूटनीतिक समाधान होला, देशले झेलिरहेको समस्या अन्त्य होला, राजनैतिक अस्थिरता सकिएला, आमजनताले काम गरेर खाने वातावरण बन्ला भन्ने अपेक्षा एवं कामना गरेको छु ।
चेतन सापकोटा, संगीतकार
जनताले ०७२ को जस्तो कष्ट नपाऊन् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
पुरानो झ्यालबाट नयाँ क्षितिजतर्फ हेर्दै आशा, ऊर्जा र मुस्कानसहितको यात्राको अपेक्षा गरेको छु ।
नेपालीहरूमा राष्ट्रप्रति सकारात्मक सोचको विकास होस्, देशको माया भन्दै विदेश जानेहरूको लर्को नघटोस् ।
प्रभात रिमाल, इभेन्ट म्यानेजर
नयाँ वर्षबाट त खासै केही अपेक्षा गरेकी छैन, तर आफैंबाट चाहिँ नयाँ वर्षमा केही महत्वपूर्ण योजना पूरा गर्ने सोच छ ।
आश्मा डिसी, नायिका
म अपेक्षाभन्दा पनि काममा विश्वास गर्छु ।
गजित विष्ट, नायक
उखान–टुक्का सुनाउन अनि अभिनय गर्न छाडेर हाम्रा आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू गम्भीर भै देशको विकासमा लाग्नुहुनेछ । राज्यले जनताको घाउमा मल्हम लगाउने काम गर्नुका साथै देश विकासमा मन लगाउने छ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु ।
जान्वी बोहरा, नायिका
देशमा शान्ति स्थापना होस्, देश टुक्रयाउने खेल बन्द होस् । नयाँ संविधान पूर्णरूपमा लागू होस् तथा लोडसेडिङको अन्त्य होस् ।
राज श्रेष्ठ, टेलिभिजनकर्मी
शान्ति सुरक्षा बढोस्, अभाव घटोस् । अघि बढ्दै गएको नेपाली चलचित्रको सफलता अझैं चुलियोस् ।
छुल्ठिम गुरुङ, नायिका
संगीत क्षेत्रमा लाग्नेहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित होस् । सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिसँग जीवनयापन गर्न पाऊन् । जनतालाई दु:ख दिने बन्द–हड्तालहरू सदाका लागि बन्द हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
भीम निरौला, गायक
गर्न खोजेको र चाहेको काम पूरा गर्न सकिने अपेक्षा गरेको छु ।
अनुप सक्सेना, इभेन्ट आयोजक
नयाँ वर्ष आउनु भनेको आफ्नो जीवनको एक वर्ष घट्नु पनि हो, तसर्थ जीवनको बाँकी समयलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्धिमूलक कार्य गरेर समयको सदुपयोग गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
समन अधिकारी, म्युजिक भिडियो निर्देशक
म अपेक्षा गर्नुभन्दा काम गर्न रुचाउँछु, ०७३ मा आफ्ना काम (कृषि र अभिनय) लाई निरन्तरता दिनेछु ।
सुशीलराज पाण्डे, अभिनेता
भूकम्प र नाकाबन्दीले ०७२ मा तनाव भयो, ०७३ मा सबै तनावबाट मुक्त भै देश र चलचित्र क्षेत्र सफलताको उकालो उक्लियोस् ।
गोपाल कायस्थ, निर्माता/वितरक
सबल, समुन्नत र स्वाधीन नेपाल निर्माणको दिशातर्फ मुलुक अघि बढोस् । परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुन पाइयोस । दु:ख र पीडामा पिल्सिएका जनताको आँखामा हाँसो र खुसी देख्न पाइयोस् । उज्यालो भविष्यको यात्रा सुरु गर्न पाइयोस् । ऊर्जा र उत्साहको सञ्चार होस् । मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लागोस् । सबैको शुभ होस्, मंगल होस्, जय होस् ।
उद्धव पौडेल, चलचित्र व्यवसायी
टुटेको, फुटेको, भत्किएको, बिग्रिएको समाचार सुन्नु नपरोस् । हामीले नेपाली भनेर गर्वका साथ बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस् ।
निर्मल शर्मा, अभिनेता/निर्देशक
०७२ बाट गरिएको अपेक्षामध्ये के नै पूरा भयो र ०७३ मा अपेक्षा गर्नु ?
आर्यन सिग्देल, नायक
नयाँ वर्ष ०७३ मा सम्पूर्ण जनतामा यति धेरै खुसी सञ्चार होस् कि त्यही खुसी र उमंगले गर्दा ०७२ मा पाएको दु:ख–पीडा बिर्सने शक्ति मिलोस् । देशमा देखिएको राजनैतिक चलखेल एवं वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य होस् ।
संजय श्रेष्ठ, गायक
धेरै अपेक्षा गरेको छु । मैले बनाउने चलचित्रले दर्शकहरूलाई पूर्ण मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । मेरो जीवनमा पनि अझ राम्रा चलचित्र निर्माण गर्ने शक्ति एवं सोच आओस् भन्ने प्रार्थना छ ।
सुनिल रावल, निर्माता
प्राकृतिक प्रकोपले नसताओस् । नाकाबन्दीजस्तो बिडम्बनाको अन्त्य होस् । भोकाएकाहरू अघाऊन् । देशको नाम विश्वभर फैलियोस् ।
भोलाराज सापकोटा, अभिनेता
प्रकाशित :वैशाख १, २०७३
दसैंको दक्षिणाले किनेको महत्वपूर्ण कुुरा के हो ? आश्विन २८, २०७५
तपाईं आफैं उल्लू भएको क्षण कुन हो ? आश्विन १५, २०७५
तपाईंले झ्याप पारेको महत्त्वपूर्ण वस्तु के हो ? आश्विन ९, २०७५
काठमाडौंको सडकले कत्तिको हैरान बनाएको छ ? आश्विन १, २०७५
तीजलाई कसरी स्पेसल बनाउँदै हुनुहुन्छ ? भाद्र २४, २०७५
बाथरुममा कुन गीत बढी गुनगुनाउनुहुन्छ ? भाद्र १७, २०७५
गोरुजात्रा किन नमनाइएको होला ? भाद्र १०, २०७५
बक्स अफिस लागू हुँदा कस्तो लागिरहेको छ ? भाद्र ४, २०७५
काठमाडौंका मेयरलाई के सुझाव छ ? श्रावण २९, २०७५
नेपालको राष्ट्रिय रोग के हो ? श्रावण २१, २०७५